Belgium oo kaalinta koowaad ee Group-ka G ugu awood sheegtay England kadib markii ay iska xaadiriyeen wareega 16-ka ee koobka aduunka – Gool FM
Belgium oo kaalinta koowaad ee Group-ka G ugu awood sheegtay England kadib markii ay iska xaadiriyeen wareega 16-ka ee koobka aduunka
(Russia) 28 Juunyo 2018. Kulanka oo ahaa Mid aad u xiiso badan ayaa waxaa uu u dhaxeeyay xulalka Belgium iyo England waxaanayna labada xul kusoo xirteen kulanlkooda saddexaad ee Group-ka G.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si cajiib ah ee ku dheehan weerar iyo weerar celis waxaana qeybta koowaad lagu kala baxay 0-0 maadaama ay labada xul awoodi waayeen in ay goolal iska dhaliyaa,
Labada dhinaca ayaa helay fursado dhowr ah ay shabaqa ku gaaro kareen inta ciyaarta socotay, balse ugu dambeyn waxay labada dhinac ku kala nasteen 0-0.
Laakiin daqiiqadii 51-aad ee qebtii labaad ciyaarta Adnan Januzaj ayaa hogaanka u dhiibay xulka qaranka Belgium wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0, kadib markii uu si qurxbadan u habeestay difaaca England ayuu shabaqa dhax dhigay kubada, waxaana goolkan ka caawiyay Youri Tielemans.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-0 ay guusha ku gaareen wiilasha xulka qaranka Belgium oo Group G kaga soo baxay kaalinta koowaad, halka England oo guuldaro la kumlay uu kusoo baxayo booska labaad.
Dhanka kale xullalka xili hore si rasmi ah u xaqiijiyay in ay ka hareen koobka aduunka 2018 ee Panama iyo Tunisia ayaa kulankoodii ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo labada xul ay qeybtii hore ku kala nasteen barbaro 1-0 uu ku hogaaminayay xulka Panama.
Panama ayaa goolka ay dhaliyeen wuxuu yimid daqiiqadii 33-aad waxaana si kam ah isaga dhaliyay xidiga xulka Tunisia Yassine Meriah oo ciyaarta ka dhigay 1-0.
Qeybta labaad marka leysku soo laabtay daqiiqadii 51-aad xulka Tunisia ayaa ciyaarta ka dhigay 1-1, waxaana goolka u dhaliyay Fakhreddine Ben Youssef kadib markii uu ka caawiyay saaxiibkiis Wahbi Khazri.
Daqiiqadii 66-aad xulka Tunisia ayaa la yimid goolka labaad ee ciyaarta waxaana u saxiixay Wahbi Khazri oo caawin ka helay Oussama Haddadi, ciyaarta ayaana ku soo idlaatay 2-1 ay guusha ku raacday Tunisia.
Maxaa ku dhacay Batshuayi kadib goolkii uu dhaliyay Adnan Januzaj?!
Yaa loo doortay xiddiga garoonka kulankii Belgium ay guusha ka gaartay England?